Fennel tii: Ndeapi mabhenefiti? Dzikama? Zvinoita kuti ubatwe nehope here? Kugadzira?
Chikafu chakapfuma muvhitamini D3: tarisa kuti ndeapi anofanira kupinda mukudya kwako
Zvokudya	 31 December 2018
Fennel tii: Ziva mabhenefiti makuru uye nenzira kwayo yekugadzirira
Kune avo vanofarira tii, fennel tii inogara iri sarudzo huru. Kunze kwekuve unofadza, fennel ine inoshamisa zvinhu kune hutano hwevanhu uye kugara zvakanaka. Naizvozvo, inokurudzirwa kwazvo kwekudya kwemangwanani kana masikati masikati.
Mune inotevera misoro iwe unodzidza zvese zvaunoda nezve fennel tii. Iwo mabhenefiti, maitiro aanofanira kuitwa, kana achishanda sechigadzikiso uye nerumwe ruzivo rwakakodzera nezve ichi chinwiwa chinwiwa. Buda!
Ndezvipi zvakanakira fennel tii?
Fennel tii ine zvakawanda zvakanaka. Izvo zviri pachena ndezvekuti yakanaka sosi yezvinhu zvinovaka muviri, senge ferro, zinc, calcium, mavhitaminzi A, B yakaoma, C, Kunze kwezvo fiber.
Iyo fiber nyaya zvakare inoita fennel tii yakanaka kune yekugaya system. Inogadzirisa ura uye inoita kuti chikamu chakakosha chemuviri wemunhu chishande nenzira yainofanira kuita.
Iyo fennel tii yakanaka kune avo vanotambura kurwadza kwekuenda kumwedzi, kunze kwekutarisanawo nematambudziko ekufema, mweya wakashata uye kuve wakanakira hutano hwemaziso uye kunyangwe nemoyo.
Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti fennel tii inorwira izvo zvinonzi mahara radicals, ayo anokonzera kuchembera, cell oxidation, chaiwo marudzi ekenza, chirwere cheAlzheimer uye kunyange sitiroko.
Vacheche vanosvika pamwedzi mitanhatu vanofanirwa kupihwa mukaka wemuzamu, chete izvo zvinodiwa kuti vave nezvose zvinovaka muviri, majekiseni, maseramu, muchidimbu, zvese zvavanoda kuti vararame zvakanaka uye vaine hutano hwakanaka.
Mushure menguva iyi yenguva, mwana anogona kuenderera nemukaka wemukaka, anogona kuchengeta mukaka waamai nezvimwe zvekudya, kana kumira kumira kuyamwa uye zvishoma nezvishoma kuchinjira kune rumwe rudzi rwekudya.
Muchikamu chechipiri, mwana anogona kunwa fennel tii, kana chiremba achibvumidza kushandiswa kwechinhu ichi. Iyi tii yakanaka kune vana vane colic, iyo yakajairika mumakore ekutanga ehupenyu. Uyu mushonga chaiwo kunyangwe padambudziko iri, nesainzi rakaoneswa nevimbiso yepamusoro yekuti rinogumisa marwadzo.
Chii chinonzi fennel tiyi ine chamomile?
Kana iwe uchida kuzorora, hapana chinhu chiri nani pane kusanganisa camomile nefeni. Kupedzisa uye kushandura tii kuita "Husiku hwakanaka, Cinderella", ingo wedzera mudiki shuwa michero, iri yechokwadi yekurara.
Sarudzo huru yetii yekuti iwe unwe usiku, kunyanya kana uine hope kana kunetseka kurara. Iyo inonaka uye inozorodza zvikuru.
Zvinoita kuti ubatwe nehope here?
Iyo fennel tii inyoro nyoro, haina kukuita iwe uve nehope, asi iyo inobatsira iwe kuti unzwe wakasununguka. Chete kana iwe ukasanganisa iyo miriwo nemimwe mishonga yekurara yekurara, senge chamomomile kana shungu yemichero, unozobatwa nehope, asi iyo, yega, inokunyaradza, asi kurara chaiko kune vamwe vanhu chete.
Nzira yekugadzirira fennel tii?
Iyo yakanakira chero tii ndeye kushandisa mushonga nyowani, unotengwa mune yakasarudzika chitoro kana kunyangwe mumaflorist Nekudaro, zvinogona kunge zviri kuti mune rako guta iwe unongova nembeu yakaoma, zvingave zvakare, kunyangwe iyo nyowani iri nani kwazvo.
Kugadzirira iyo fennel tii, unofanirwa kufashaira litre yemvura uye wobva wawedzera 3 mashupuni embeu yefennel, ehe, inogadzirwa nembeu. Bvisa moto, vhara pani, rega imire kwemaminitsi mashanu, simbisa uye shumira kana kuisa mufiriji. Kana iwe uchida, iwe unogona kutapira iyo, kunyange zviri nani kuitora isina chero zviwitsi.
Sinamoni inoonda here?
Ose sinamoni uye fennel mishonga inodzivirira antioxidant, ndiko kuti, inobatsira nekushanda kwese kwemuviri uye kubvisa chepfu. Izvi zvichakubatsira kuora muviri, nekuti inoshanda padanho rese rekugaya uyezve pane weti, mukubvisa mafuta asingadiwe, munyu, shuga uye makabhohaidhiretsi.
Iko fennel tii inonyaradza here?
Hongu, fennel inodzikamisa, asi nenzira yakajeka. Haina kuita senge chamomile kana chibereko chekushuvira, asi ine basa rekudzikamisa.
Kana iwe waifarira chinyorwa ichi nezve fennel tii, igovane pane ako masocial network!
Kudya kwaPavorô: Isu tinoratidza zvese nezvake!
5 yekutsvedza mishonga inogona kungotengwa nemushonga
Zvikafu zvakapfuma mumaCarhydrate
Kushambira: Inobatsira iwe kurasikirwa uremu? Ndezvipi zvakanakira? Uye zvevacheche? Inosimbisa mhasuru dzako?